PVC Wood-Plastika tsipika fitaparitahana dingana iray - China PVC Wood-plastika iray mpamatsy tsipika mpanatontosa, orinasa –Jwell
PVC Wood-Plastika Dingana iray Extrusion
Dingana iray izay manala ny granular afovoany amin'ity rohy ity. ataovy mivantana ao anaty vondrona misy fitaovana ny akora, miaraka amin'ny vokatra mifangaro sy esorina ao anatin'ny indray mandeha. Ny tombony amin'ity fomba ity dia ny fahombiazana avo lenta, ny fampifangaroana plastika, ary ny fitsitsiana angovo lehibe, ny vidin'ny famokarana ambany. Amin'izao fotoana izao, ny fampiasana ao amin'ny kilasy PVC an'ny vokatra extrusion plastika-hazo dia mahazo bebe kokoa, saingy mitaky bebe kokoa amin'ny akora, fitaovana famahanana, manohana ny lasitra sy ny fitaovana extrusion. Ary koa ho an'ny haavo teknolojia amin'ny ankapobeny.